RASMI: Kooxda Manchester City oo heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
(Manchester) 20 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa heshiis cusub oo saddex sanadood ah ka saxiixatay ciyaaryahankeeda Oleksandr Zinchenko.
Heshiiskan cusub ayaa da’yarkan Oleksandr Zinchenko ku sii hayn doona kooxda Manchester City illaa sanadka 2024-ka.
Waxa ay kala soo wareegeen kooxda Ruushka ee FC Ufa saddex sanadood ka hor, 22 sano jirkaan ayaana bandhig wacan sameeyey xilli ciyaareedkii dhawaan dhammaaday, isagoo ka hoos ciyaarayey Tababare Pep Guardiola, waxaana uu qeyb ka ahaa xiddigihii Man City ee saddexleeyda koobab ee maxaliga ah ku guuleystay.
Zinchenko ayaa 29 kulan u ciyaaray tartammada oo dhan intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii dhowaan dhammaaday ee 2018-19, waxaana hadda lagu abaal-mariyey saddex sanadood oo heshiis kordhin ah.
“Aad ayey u dhib-badan tahay inaad horumar sameyso oo aad joogteyso, hadda anigu waan ku faraxsanahay inaan saxiixay heshiiskan.” ayuu yiri xiddiga xulka qaranka Ukraine.
“Saraakiisha kooxdan xiddigaha waxa ay siiyaan wax waliba, waxayna u baahan yihiin inay sare u kac iyo horumar sameeyaan, sidaas darteed inaan halkaan ka bilaabo shan sanadood oo kale oo aan la sii joogayo City sharaf ayey ii tahay.”
Heshiiskan cusub ee uu maanta saxiixay Zinchenko ayaa ku soo aaddaya xilli kooxdu ay Kyle Walker shalay oo Arbaco ahayd ka saxiixatay heshiis cusub oo gaarsiisan illaa sanadka 2024-ka.
RASMI: Tababarihii bartilmaameedka u ahaa Chelsea ee Erik ten Hag oo heshiiska u kordhiyey kooxda Ajax